တိုက်ခန်း - ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တိုက်ခန်းအရောင်း Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
တိုက်ခန်း classified: ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တိုက်ခန်းအရောင်း
မင်္ဂလာပါ ကြည့်မြင်တိုင် မြို့နယ် တိုက်ခန်း‌ရောင်းရန် နေရာ - ကြည့်မြင်တိုင် လမ်း. - သရက်တောလမ်း အခန်းအကျယ် - 12ပေခွဲ ပေ50 အိပ်ခန်းအရေအတွက် - အခန်း 2ခန်း။ အလွှာ. -မြေညီထပ်ခိုးတွဲရက် စျေးနှုန်း. - 650သိန်း (ညှိနှိုင်း) ပရိဘောဂ - ပါကေးခင်း ။ပြင်ဆင်ပြီး ။ CCTV camera4လုံးတပ်ဆင်ပြီး ။အနောက်ဘက် မြေပိုပါရှိ ။ လူကြီးမင်းတို့၏ ငှါးရမ်းလိုသော/ ရောင်းချလိုသော အိမ်ခြံမြေ /တိုက်ခန်း /ကွန်ဒို များအား " ကမ္ဘာ့ မင်းရာဇာ "အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ တွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်အပ်နှံနိုင်ပါသည်။ ရောင်းချခြင်း/ဝယ်ယူခြင်း/ငှါးရမ်းခြင်းများအတွက် အဆင်ပြေလွယ်ကူမြန်ဆန်စေရန်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ မြို့နယ်စုံ အိမ်ခြံမြေ တိုက်ခန်း ကွန်ဒိုများ ငှါးရမ်းလိုသူ/ဝယ်ယူလိုသူ ဧည့်သည်များလည်း " ကမ္ဘာ့မင်းရာဇာ "အိမ်ခြံမြေ Page တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့ ပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ #ငှားရမ်းချင်သောဝယ်ယူချင်သောcustomersများရှိပါသဖြင့်လူကြီးမင်းတို့ငှါးရမ်း‌လိုသောရောင်းချလိုသော #အိမ်ခြံမြေကွန်ဒိုလုံးချင်းတိုက်ခန်းများကိုလည်ယုံကြည်စွာအရောင်းအငှားအပ်နှံနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကဖုန်းဖြင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်.....ကမ္ဘာ့မင်းရာဇာ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် 09793386697(viber,whatapps) 09772982709 09676790990(viber,whatapps) 0967272725